Grass Valley သည် EDIUS 9.5 နောက်ဆုံးပေါ်တည်းဖြတ်ခြင်းဆော့ဝဲလ်ဖြင့်ပိုမိုထိရောက်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုရရှိစေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » မြက်ချိုင့်တည်းဖြတ် Software ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း, EDIUS 9.5 နှင့်အတူမဟာထိရောက်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးဆောင်ကြဉ်း
မြက်ချိုင့်တည်းဖြတ် Software ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း, EDIUS 9.5 နှင့်အတူမဟာထိရောက်မှုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးဆောင်ကြဉ်း
Montreal - 16: 00 CET စက်တင်ဘာလ 12, 2019 - မြက်ချိုင့် ယင်း၏စွယ်စုံများနှင့်အစာရှောင်ခြင်း nonlinear တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲသစ်ကိုအင်္ဂါရပ်များဆက်တိုက်ဖွင့်နေသည် EDIUS။ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များကိုယနေ့သူတို့တစ်တွေလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲ mediascape ဖြေရှင်းရန်အဖြစ်သူတို့အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းတတ်နိုင်သမျှစျေးကွက်မှဆောင်ကြဉ်းနိုင်မကြွယ်ဝသောဖြစ်မည်ပုံပြင်များကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ် EDIUS တိုးမြှင့်မှုများ, အသုံးပြုသူများအတွက်တင်းကျပ်တဲ့ပေါင်းစည်းမှုဆောင်ကြဉ်းတိုးမြှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ပိုပြီးဖန်တီးမှုပါဝါကယ်နှုတ်တော်မူ။
အဆိုပါ EDIUS 9.5 update ကိုလည်းပါဝင်သည်:
Multicam အသံထပ်တူပြုခြင်း - EDIUS ယခုပိုကောင်းကလစ်ပ်၏ထပ်တူအချိန်ပုဆိန်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကအသံဒေတာကိုသုံးပြီးညှိအသစ်တစ်ခုကို sequence ကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်; အသုံးပြုသူများသည်ကိုလည်းအသံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်တည်ဆဲပာအသစ်ကလစ်များထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်
Blackmagic RAW ဒီကုဒ်ဒါနှင့် Blackmagic ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Gamma ထောက်ခံမှု - ယခုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများတစ်ခု ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်အနှံ့အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပံ့ပိုးပေး
ProRes 4444 (Alpha ရုပ်သံလိုင်းထောက်ခံမှု) ပို့ကုန် - ဒီကဆက်ပြောသည် format ကိုအသုံးပြုသူများကပိုပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Workflows တည်ဆောက်ရန်နှင့်အဆင့်မြင့်ဖန်တီးမှုများကို enable လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု
Katsushi Takeuchi, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာတည်းဖြတ်ရေးစနစ်များ, မြက်ချိုင့်ကပြောပါတယ်: "ကြည့်ရှုအရင်ကထက်ပိုပြီးအကြောင်းအရာစားသုံးနှင့်အတူ, ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီး, ကထုတ်လွှင့်, အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီများသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြောင်း tools တွေကိုအသုံးချနိုင်သောကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသည် မြန်ဆန်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ဒီဖြစ်ပေါ်နေသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဆက်လက်သေချာကြောင်းဆက်ကပ်အပ်နှံဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအလုပ်၏ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကနေ EDIUS စနစ်ကအကျိုးခံစားခွင့်။ ဒါကနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်ပုံစံများ၏အကွာအဝေးကိုဖြတ်ပြီးအော်ပရေတာများအတွက် feature များထဲမှာခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့နှင့်ပိုပြီးထိရောက်လုပ်ငန်းအသွားအလာဆောက်လုပ်ရေးဆောင်တတ်၏, မြက်ချိုင့်ဖောက်သည်အကောင်းဆုံး-In-class ကိုအင်္ဂါရပ်တွေကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ "
EDIUS အသုံးပြုသူများကိုအဘယ်သူမျှမပိုကုန်ကျစရိတ်မှာစက်တင်ဘာလ 9.5 စတင်ဗားရှင်း 2019 ၏ feature အသစ်ဖြန့်ချိခံရလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စက်တင်ဘာလ9ပြီးနောက် EDIUS 13 ဆော့ဖ်ဝဲကိုဝယ်ယူတဲ့သူဖောက်သည်များ, 2019 လည်း EDIUS9နှင့်နောက်လာမည့်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးလုံး၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါဦးမည်သည့်အဆင့်မြှင့်တင်မြှင့်တင်ရေးအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်။ မြှင့်တင်ခြင်း၏အသေးစိတ်မြက်ချိုင့် website တွင်အောက်တိုဘာလ 1, 2019 ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် 2019-09-12
နောက်တစ်ခု: မြက်ချိုင့် GV Orbit နှင့်အတူ IP ကိုစစ်ဆင်ရေးမှပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ပါဝါနှင့်ထိန်းချုပ်ရေး၏နယူး Levels ဘဝမှကယျတငျ